जाडो मौसममा किन बढी हृदयघाट हुन्छ ? युवा अवस्थामै हृदयघात हुनुको कारण यस्तो छ ? « Today Khabar
जाडो मौसममा किन बढी हृदयघाट हुन्छ ? युवा अवस्थामै हृदयघात हुनुको कारण यस्तो छ ?
प्रकाशित ७ मंसिर २०७५, शुक्रबार १२:२६
जीवनशैलीको परिवर्तनसँगै मुटुरोग मानव मृत्युको पहिलो कारण बन्दै गएको छ। सहरीकरणसँगै बढेको अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण पुरुष र महिला दुवैमा हृदयाघातको दर बढ्दो क्रममा छ। विगतमा यो रोग विशेषगरी ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसमा देखिन्थ्यो भने अहिले ४० भन्दा कम उमेरका युवाहरूमा देखिने क्रम बढिरहेको छ।
हृदयाघात भइकेपछि तत्काल अस्पताल जानुपर्छ। जति छिटो उपचार गर्न सक्यो बिरामीमा पर्ने असर त्यति नै रोकथाम गर्न सकिन्छ। हृदयाघात भएको ६० देखि ९० मिनेटभित्र उपचार भइसक्नुपर्छ। यो अवधिलाई गोल्डेन आवरका रूपमा लिइन्छ। #नेपाल लाइभबाट